यसकारण भए कांग्रेस माओवादी ब्याक |
यसकारण भए कांग्रेस माओवादी ब्याक
प्रकाशित मिति :2017-05-07 17:05:32
आइतवार मध्यान्ह नयाँ बानेश्वस्थित संसद भवनको सभामुख कक्षमा हतारिदै छिरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एउटा प्रस्ताव राखे– महाभियोगको झण्झटतिर नलागौं । ब्याक होऔं । सभामुख ज्यू ।
आफ्नो कक्षमा छिर्नेवित्तिकै देउवाले उक्त प्रस्ताव सुनाएपछि सभामुख ओनसरी घर्ती एकछिन त ट्वाल्ल परिन । उनले बस्न आग्रह गरिन । देउवा नजिकै कुर्सीमा बसे र महाभियोगले उत्पन्न गरेको तनाव सेटल गर्नेबारे घर्तीसँग छलफल थाले ।
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रसँग मिलेर आफैले अघि सारेको प्रस्तावबाट सत्तापक्ष किन ब्याक भयो ? देउवाले यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल पनि यसबारे लचक बन्दै गएको उनका नजिककाहरु बताउछन् । महाभियोगका खास डिजाइनर देउवा किन ब्याक भए ? किन उनी यो मामिलाको सहज अवतरण चाहन्छन् ? यसमा मुख्यत : तीन कारण छन् । पहिलो महाभियोग नाजायज भएको र यसले संविधानको सर्वोच्चता मिचेको भन्दै प्रमुख विपक्षी एमाले कडा विरोधमा उत्रियो । एमालेकै पक्षमा ठूलो जनमत उर्लियो । यसले सरकारले केटाकेटी पाराले महाभियोग जस्तो ठूलो संवैधानिक अस्त्र प्रयोग गरेको प्रष्ट देखियो ।
दोस्रो कारण, महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चले नै शुक्रबार अन्तरिम आदेश दियो र प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले सर्वोच्चमा हाजिर समेत गरेकी छिन् । यो अन्तरिम आदेश यस्तो न्याायधीशको इजलासबाट भयो, जो कार्कीको विपक्षी लवीका थिए । न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको इजलासबाट अन्तरिम आदेश भएको थियो । जबरा सर्वोच्च छिरेदेखि नै कार्कीसंग पानी बाराबारको सम्बन्ध थियो भने कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग नजिकका थिए । देउवाका निकट भनेकै न्यायाधीशबाट महाभियोगको विपक्षमा आदेश भएको थियो । जुन आदेशको टेकोमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जिम्मेवारी थालिसकेकी छिन् ।
तेस्रो कारण नजिककैको स्थानीय तहको चुनावै हो । अनावश्यक बखेडा गरी सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि दर्ता गरेको महाभियोगले कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता र समर्थकलाई निरास् तुल्याइदियो । चुनावको संघारमा मतदाता भड्किए । त्यसको धेरै मारमा कांग्रेस परेको छ ।
यी मुख्य कारणले कांग्रेस र माओवादी महाभियोग प्रकरणदेखि तर्सिएको छ । आफैले खनेको खाल्डामा आफै पर्ने स्थिति बनेपछि उनीहरु सहज निकासको बाटो खोजेका हुन् । केही कांग्रेस र माओवादी नेताहरुले यसबीचमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश जबराले संसदको विशेषाधिकार खोसेको भन्दै कारवाही हुनुपर्ने सम्मको तर्क गर्न थालेका थिए । दुवै पार्टी नजिकका केही कानुनव्यवसायीले संसदको विशेषाधकिारबारे खुब तर्क पनि गरे । तर, जब यो प्रकरणले एकपछि अर्को आफू फस्दै जाने देखेपछि देउवा ब्याक हुने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिवार प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनावको मुखमा उल्टो बाटो नहिंडन सुझाव दिएका थिए । संविधान मिच्दै जाने, न्यायालयलाई जथाभावी चलाउने, चुनाव पनि विथोल्दै जाने हो भने आफूहरु झन कडा हुने भन्दै ओलीले धम्की दिएका थिए । यस्तै सन्देश देउवालाई पनि सुनाएका थिए ।
त्यसको प्रभाव आइतवारको संसद बैठकमा पनि देखियो । बैठक अघिनै देउवाले सभामुखलाई भेटेका थिए भने प्रधानमन्त्री दाहालसंग भने सभामुखले विहानै भेट भएको थियो ।
सबै भेटको निष्कर्षपछि सभामुखले संसद बैठक नै चुनाव पछिलाई सारिन । जेठ ४ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेर उनले पत्रकारहरुमाझ राज्यका ३ वटै अंगबीच शक्ति सन्तुलन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति समेत दिएकी थिइन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश विरुद्ध कारवाही गर्ने भनी आफ्ना वकिलले दिएका सुझाव अटेर गर्दै देउवा र दाहाल सन्तुलन मिलाउन जुटेका हुन् । त्यसैको परिणाम हो संसदको आइतवारको दृश्य ।
देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अब ब्याक हुनका लागि अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्न कुनै निवेदन पर्न सक्छ । उक्त निवेदनमार्फत अन्तरिम आदेश भ्याकेट भएपछि महाभियोग प्रकरण समेत सेलाउनेछ ।